Guulaha Guardiola ee horyaalladii uu ka qeyb galay, waana Macallinka 3-aad ee Seddax Horyaal oo Dalalka waaweyn ah qaaday | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Guulaha Guardiola ee horyaalladii uu ka qeyb galay, waana Macallinka 3-aad ee Seddax Horyaal oo Dalalka waaweyn ah qaaday
Guulaha Guardiola ee horyaalladii uu ka qeyb galay, waana Macallinka 3-aad ee Seddax Horyaal oo Dalalka waaweyn ah qaaday
Manchester City ayaa noqotay horyaalka Sanadkan ee Premier League ka gadaal Khasaare gurigooda lagu gaarsiiyay kooxda Manchester United oo aheyd naadiga ugu dhow ciyaartii xalay ay la qaateen West Bromwich.
City ayaa hadda hoggaanka ku heysata16 oo ay ka sarreyso kooxda ku xigta ee United waxaana harsan 5 kulan oo horyaalka ah.
Taasina waxay la macno tahay in macallinkii hore ee Barcelona uu hadda ku guuleystay 23 koobab waaweyn ah inta uu macallin yahay isagoo 517 kulan hoggaaminayay naadiyada uu sida rasmiga ah usoo maamulay, taasoo la macno ah in uu koob qaadayay 23 kulan oo kasta marka la isu qeybiyo koobabka uu heysto iyo kulamada uu hoggaamiyaha ahaa.
Arsenal ayaa dhankeeda ku jabtay ciyaartii ay shalay Gelinkii dambe la qaadatay kooxda Newcastle, taasoo Khasaare 2-1 ah gaarsiisay Gunners oo goolka ku horreysay.
Man Utd iyadana waxaa lagu garaacay 1-0, kulankii Old Trafford ka dhacay ee West Brom ay la qaadatay.
Haddaba City ayaa sidaas ku ah kooxda Horyaalka England ee Sanadkan, iyadoo kulamo ay horyaalka uga harsanyihiin.
Halkan ka ogow dhammaan koobabka uu qaaday Guardiola waqtigiisa Mucjisada.
Guardiola’s 23 Trophies as a coach (Barça 14, Bayern 7 & Man City 2) #TeamPep #GraciesPep
UEFA Super 3
Spanish Super 3
German Cup 2
English League Cup 1
Marka laga reebo Mourinho oo qaaday, Horyaallada, England, Spain iyo Italy, macallinka kale ee kaga guulaha badnaa wuxuu ahaa Ancelotti oo qaaday Italy, England, France iyo Germany, iyadoo Guardiola, uu qaaday Horyaallada dalalka Spain, Germany iyo England.